चीनसँग अबको पाँच वर्षमा चार नाकाबाट सडक सञ्जाल जोडिने | Radio Langtang 90.3 Mhz
चीनसँग अबको पाँच वर्षमा चार नाकाबाट सडक सञ्जाल जोडिने
Post on: January 8, 2017
२४ पौष, रसुवा । उत्तरी छिमेकी चीनसँग अबको पाँच वर्षमा चार नाकाबाट सडक सञ्जाल जोडिने भएको छ ।
सरकारले किमाथांका, रसुवागढी, कोरला र हिल्सा नाकाबाट चीनसँग जोडिने सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडक विभागका अनुसार यी सडक पाँच वर्षभित्र दुई लेनको बनाइने छ ।
विभागको उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार चारमध्ये तीन नाकामा आगामी दुई वर्ष्भित्र सडक पुग्नेछ । हिल्सा नाका केही महिनामै सिमकोटसम्म जोडिए पनि त्यो कर्णाली राजमार्गमा मिसिन भने पाँच वर्ष लाग्नेछ ।
चार नाकामध्ये रसुवागढीमा अहिले पनि यातायात सञ्चालनमा छ । गल्छी–बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेशी हुँदै रसुवागढी रुटमा सवारी चलिरहे पनि बेत्रावती–धुन्चे खण्ड दुई लेन बनाउनभन्दा बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सडक बनाउन उपयुक्त हुने ठानेर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ ।
मैलुङदेखि स्याफ्रुबेशीसम्मको १६ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी उद्धव बिष्टका अनुसार सेनाले ५.५ किलोमिटर ट्रयाक खोलिसकेको छ भने बाँकी १०.५ किलोमिटर ट्रयाक एक वर्षभित्र खोलिसक्ने छ ।
पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेशी सडक ५४ किलोमिटर लामो छ । बेत्रावतीदेखि धुन्चेको उकालो र धुन्चेदेखि स्याफ्रुबेशीसम्मको ओरालोमा ३५ वटा घुम्ती छन् । राम्चे र मूलखर्कमा जाने पहिरोले यो बाटो बेलाबेला अवरोध हुने गर्छ। नयाँ बन्ने बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सडक ३१ किलोमिटरको हुनेछ ।
सिग्देलका अनुसार गत कात्तिकमा गल्छी–बेत्रावती (४६ किलोमिटर) दुई वर्ष्भित्र दुई लेनको बनाइसक्ने गरी ३ अर्बमा ठेक्का भइसकेको छ । स्याफ्रुबेशीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटरमा चीन सरकारले एक लेन बाटो ग्राभेल बनाएको छ। त्यो बाटो दुई लेनको बनाउन चिनियाँ पक्षले सर्भे पनि गरिसकेको छ। बाटो चिनियाँ पक्षले आफ्नै लगानीमा दुई लेनको बनाउने बताएको छ ।
मैलुङ–स्याफ्रुबेशी बाटो बन्यो भने यो काठमाडौंसँग चिनियाँ सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हुनेछ । यो बाटोलाई चितवनको ठोरी नाकामा जोड्ने सरकारी योजना छ ।
विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण खै ?
अयोग्य घोषणा भई बहिर्गमित लोकमानले २५ लाख रुपैयाँ पचाउँछन् कि फिर्ता गर्नुपर्छ ?
मत सर्वेक्षण गरिए कारबाही : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
काठमाडौँ, ११ मंसिर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई आधार मानेर कुनै माध्यम वा संस्थाले ...
रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने
२६ असार-चीनसँग जोडिने दोस्रो व्यापारीक नाका रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ । रसुवाको टिमुरेमा जग्गा खोजेर बन्दरगाह निर्माण ...
काठमाडौं, १८ फागुन– नेपाली कांग्रेसको फागुन २१ गते हुने संसदीय दलको नेताको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आर्यक्रम अनुसार फागुन २० गते साँझ ६ बजेदेखि साढे ...